ပြောင်းဖူး Peeler ခြွေလှေ့စက်,ပေါင်းစပ်ထားသော Corn Sheller Thresher New Idea Design
ပြောင်းဖူးခြွေလှေ့စက် နှင့် peeler စက်ဘက်စုံသုံးပေါင်းစပ်ခဲ့သည်, တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပြောင်းဖူးစေ့ခြွေလှေ့စက်သည်အရေပြားကိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးပြောင်းဖူးမှပြောင်းဖူးမှကြိတ်ခွဲနိုင်သည်,သို့သော်ရော်ဘာတူကြိတ်စက်ကိုကြိတ်ရန်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်အပင်များကိုမပျက်စီးပါစေနှင့် ,ငါတို့သည်လည်းလက်ဝဲ - လက်ျာပေါင်းစပ်နှင့်တက် -Down ပေါင်းစပ်အမျိုးအစားရှိသည် ပြောင်းဖူး peeler စက်.
ပြောင်းဖူးခွံနှင့်ခြွေလှေ့စက်မျိုးကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အသစ်စက်စက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းကိုပူရောင်းချသောကြောင့်ပြောင်းဖူးခွံခြွေလှေ့စက်ကိုအလွယ်တကူလည်ပတ်နိုင်သည်။, အလုပ်သမားချွေတာ, မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းအဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးကို. ပြောင်းဖူးခွံခြွေလှေ့စက်တွင်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပြီးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်သည်။ ပြောင်းဖူးအခွံနှင့်ခြွေလှေ့စက်သည်အရေပြားကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရန်အတွက်ပေါင်းစပ်ထားသောအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်သောအစိတ်အပိုင်းများသည်လျင်မြန်သောအမြန်နှုန်းနှင့်ကျိုးပဲ့မှုနှုန်းသောသံတူနာများကိုအသုံးပြုသည်။ အကယ်၍ ဤသို့ပေါင်းစပ်ထားသောစက်မျိုးကိုသင်မလိုချင်ပါကကျွန်ုပ်တို့လည်းခွဲထုတ်ထားသည် ပြောင်းဖူးခြွေလှေ့စက် နှင့် ပြောင်းဖူးအခွံစက် မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက်.
1.ပြောင်းဖူးကြိတ်ခွဲစက်သည်ခြွေလှေ့ခြင်းနှင့်အခွံများကိုပေါင်းစပ်သည်,ပထမ ဦး ဆုံးအရေခွံ,ထို့နောက်အဆန်လှည်း.
လျှပ်စစ်မော်တာ / ဓာတ်ဆီ / ဒီဇယ်